Liverpool Oo Qorsheyneysa Inay 17 Milyan Ginni Kula Soo Wareegto Ousmane Dembele
HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo qorsheyneysa inay 17 milyan ginni kula soo wareegto Ousmane Dembele
November 14, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay rajeyneyso soo xero gelita Xidiga Barcelona ee Ousmane Dembele kuna soo biiro Anfield aduun dhan £ 17m.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa sii galaya bilihii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa Barcelona, ​​iyadoo wax yar oo horumar ah laga sameeyay xal u helida heshiis cusub.
Maamulaha cusub ee Xavi ayaa ka dhawaajiyay inuu doonayo inuu Dembele ku sii hayo kooxda, inkastoo weeraryahanka la sheegay in lagu ganaaxay inuu soo xaadiray tababarka horaantii isbuucaan.
Liverpool ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqi doonto Dembele iyadoo ay jirto hubanti la’aan ku hareeraysan mustaqbalka Mohamed Salah , El Nacional ayaana sheegaysa in Reds ay diyaar u tahay inay gasho dagaalka si ay u keento Anfield.
Dembele ayaa si xor ah ku iman doona kooxda isagoo diiday in uu heshiis cusub u saxiixo Barcelona laakiin Liverpool ayaa la sheegayaa in ay qorshaynayso lacag dhan 20 milyan oo euro oo u dhiganta (£17m) oo ay ku doonayso saxiixa xiddigii hore ee Borussia Dortmund hadii uu u wareego England.
24 jirkaan ayaa kaliya ciyaaray 25 daqiiqo oo kubada cagta ah xilli ciyaareedkan dhaawac dartiis waxana uu u diiwaan gashaday 30 gool iyo 21 caawin 119 kulan oo uu u saftay Blaugrana.